Daniely 8 - Ny Baiboly
Daniely toko 8
Ilay ondralahy sy ny osilahy - Ny fahitana ny ondralahy; ny osilahy; ny tandroka kely sy ny nafitsony - Filazana ny heviny: ny fanjakana roa, ny Medo-Persa sy ny Greka; ilay mpanjaka masia-tarehy, nampahory an'Israely.
1Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'i Baltasara mpanjaka, nisy fahitana niseho tamiko izaho Daniely, taorian'ilay niseho tamiko taloha. 2Ary nahita aho tamin'ny fahitana, ary nony nijery aho dia indro tany Sosa, ilay tanàna mimanda any amin'ny faritanin'i Elama, no nisy ahy; ary nahita aho tamin'ny fahitana, ka teo amoron'ny ony Olai aho. 3Natopiko ny masoko, dia nahita aho, dia indro nisy ondralahy iray nitsangana teo amoron'ny ony, nanan-tandroka roa izy io, avo ny tandrony roa, nefa lava noho ny namany ny anankiray, ary ilay lavalava kokoa no niposaka taoriana. 4Hitako ilay ondralahy fa nanoto niankandrefana, nianavaratra, nianatsimo; tsy nisy biby nahatoha teo anoloany tsy nisy olona nahafaka teo an-tànany; nanao izay tiany izy, ary nihalehibe. 5Izaho izany dia nandinika fatratra teo, ka indro nisy vantotr'osilahy tonga avy any andrefana, teo ambonin'ny tany rehetra, tsy nitehi-tany akory, ary nanan-tandroka niharihary tsara teo anelanelan'ny masony, izany osilahy izany. 6Nankeo amin'ilay ondralahy nanan-tandroka roa izay efa hitako nitsangana teo amoron'ny ony, izy, ary niezaka hikatroka amin'io, tamin'ny firehitry ny heriny. 7Dia hitako izy nanatona ilay ondralahy, nisafoaka taminy, mamely ity ondralahy ary nanapaka ny tandrony roa, ary tsy nanan-kery akory mba hanoha azy ilay ondralahy; fa nazerany tamin'ny tany, nohoseny tamin'ny tongony; ary tsy nisy nahavonjy an'ity ondralahy teny an-tànany. 8Nitombo fatratra ilay vantotr'osilahy ary nony efa nahery izy, tapaka ilay tandrony lehibe, fa tandroka efatra indray no hitako nisolo iny tamin'ny vazan-tany efatra.
9Nisy tandroka kely iray nipoitra avy tamin'ny anankiray tamin'ireo, nitombo fatratra teny atsimo eny sy teny atsinanana, ary tany amin'ny tany be voninahitra. 10Nitombo izy nahatakatra ny tafiky ny lanitra, nazerany amin'ny tany ny sasany tamin'izany tafika izany mbamin'ny kintana, ka nohoseny tamin'ny tongony. 11Nitombo nahatakatra ny filohan'ny tafika izy, ka nesoriny tamin'io ny fanompoana tsy tapaka ary voarava ny tokotanin'ny fitoerana masina. 12Nisy tafika anankiray voatolotra tamin'ny fahavalo noho ny fivadihana, mbamin'ny fanompoana tsy tapaka, ary nazeran'ny tandroka tamin'ny tany ny fahamarinana: nanao izany izy ka nahefa. 13Dia nisy masina anankiray reko niteny, ka hoy ny masina anankiray hafa tamin'ilay niteny: Mandra-pahoviana no haharetan'izay asehon'ny fahitana ny amin'ny fanompoana tsy tapaka, ny fahotana mampahory, mbamin'ny fandaozana ny fitoerana masina sy ny tafika hohitsakitsahina. 14Ary hoy izy tamiko: Hatramin'ny telon-jato amby roa arivo maraina sy hariva fa rahefa afaka izany dia hodiovina ny fitoerana masina.
15Raha mbola nahita izany fahitana izany aho Daniely, sady nitady hahafantatra ny heviny, dia indro nisy nitsangana teo anatrehako, niseho toy ny tarehan'olona. 16Ary injay, nisy feon'olona reko avy ao amin'ny ony Olai niantso nanao hoe: Ry Gabriely, lazao azy ny hevitry ny fahitana! 17Dia nankeo amin'ilay toerana nitsanganako izy, ka raiki-tahotra sy niankarapoka nihohoka tamin'ny tany aho, nony nanatona izy. Ary izao no nolazainy tamiko: Aoka ho fantatrao, ry zanak'olona, fa amin'ny momba ny fotoana farany, izany fahitana izany. 18Mbola niteny tamiko teo izy, no nihohoka tamin'ny tany aho voan'ny torimaso, nefa notohininy aho, dia nampitsanganiny teo amin'ny fitoerana nisy ahy 19sy nilazany hoe: Indro hampahafantariko anao, izay ho tonga any amin'ny fotoam-pahatezerana farany, fa zavatra ho amin'ny fotoana any am-parany, izany. 20Ilay ondralahy manan-tandroka roa hitanao, dia ny mpanjakan'i Media sy Persa; 21ilay osilahy lava volo, dia ny mpanjakan'i Javana ary ilay tandroka lehibe tanelanelan'ny masony, no mpanjaka voalohany. 22Izany tandroka izany no tapaka ary ireo tandroka efatra no nitsangana nandimby azy, dia hisy fanjakana efatra hitsangana amin'izany firenena izany, nefa tsy hitovy hery aminy. 23Amin'ny faran'ny fanjakan'izy ireo, rahefa feno isa ny mpivadika, dia hisy mpanjaka anankiray hitsangana, masia-tarehy, mahafantatra ny zava-miafina; 24hitombo fahefana, nefa tsy amin'ny herin'ny tenany, hanao fandravana mahagaga: hanefa izay kendreny hatao, ary hanimba ny mahery sy ny vahoakan'ny olomasina. 25Noho ny hafetseny hahavoa ny fitaka any an-tànany: hiavonavona am-po izy, ary handringana olona maro mitoetra fahizay: hitsangan-kanohitra ny mpanjakan'ny mpanjaka izy, nefa ho torotoro tsy kasihin-tanan'olombelona akory. 26Marina ny fahitana naposaka ny amin'ny hariva sy ny maraina: nefa aoka hahoronao izany fahitana izany, fa mbola ho amin'ny andro aoriana any.
27Ary izaho Daniely torana sy nandraiki-narary andro maro, vao nitsangana nanao ny raharahan'ny mpanjaka. Talanjona tamin'ny fahitako aho fa ny olona tsy nisy nahafantatra izany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0906 seconds